ခုနစ်နှစ်ဘယ်လို Long က Is? - Orich ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ(Tianjin) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ခုနစ်နှစ်ဘယ်လို Long က Is?
timeline ကို: A.D. 2011
တည်နေရာ: ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း, Tianjin, တရုတ်နိုင်ငံ
ဂဏန်း: နိုင်ငံခြားရေး TradeDepartment Salesmanagerof
DF-211H High-frequencyphotographic systemof ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း
Tbilisi, ဂျော်ဂျီယာ, ကို "နတ်ဘုရားများ၏ဥယျာဉ်" အဖြစ်လူသိများ, လှပသောမြို့ဖြစ်၏.
The New Vision ၏တက္ကသိုလ်ဆေးရုံသူမ၏နှစ်ခုက X-Ray စက်တစ်ခုအမိန့်ရှိတယ်လက်မှတ်ထိုး.
အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများကွာတင်ပို့တဲ့အခါ, သူမကသူတို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါသည်, အခါအဘယ်မှာသူမကနောက်တဖန်သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျသူမသိကြပါဘူး. သူမသည်အရာရာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်သူတို့နှငျ့အတူအားလုံးမှန်သည်မျှော်လင့်.
ခုနစ်နှစ်, အချိန်ယင်ကောင်, timeflies ...
timeline ကို: A.D. အောက်တိုဘာလ, 2017
တည်နေရာ: နယူး Vision ၏တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, Tbilisi, ဂျော်ဂျီယာ
ဂဏန်း: ForeignTradeDepartment ၏ Salessupervisor
ခုနစ်နှစ်များအတွက်, အရောင်းမန်နေဂျာတစ်ဦးဦးစီးဌာနဦးခေါင်းသို့လာခဲ့သည်, လူအပေါင်းတို့သည်တိုက်ကြီးအနှံ့ယူနစ်နှင့်အတူအမိန့်လက်မှတ်ရေးထိုး. သို့သျောလညျး, သူမကဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့နယူး Vision ၏တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၏ပထမဦးဆုံးအမိန့်ကိုမေ့လျော့ဘယ်တော့မှထားပါတယ်.
ခုနစ်နှစ်ခုနှစ်တွင်, တစ်ခုချင်းစီကိုဖောက်သည် \_ 's အလည်အပတ်ခရီးကနေတုံ့ပြန်ချက် device ကိုကောင်းသောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဘယ်လိုအရာခပ်သိမ်းနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်သူတို့နှင့်အတူသွား?
အဆိုပါစက်ကောင်းလှ၏, အဘယ်သူမျှမဆိုပြဿနာများကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာရှင်နဲ့ကျွန်မအရမ်းသဘောကျတယ် , ORICH အနာဂတ်၌မည်သည့်စီမံကိန်းကိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးရှေးခယျြမှုဖြစ်လိမ့်မည်.
ဒေါက်တာ. Konstantin ကပြောပါတယ်:
စက်ကအရမ်းကောင်းလှ၏, မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲအားလုံးအချိန်ကို, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာရှင်ရှိသမျှကိုငါသိပ်ကြိုက်. ကျနော်တို့အနာဂတ်၌မည်သည့်စီမံကိန်းကိုရှိပါက ORICH ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးရှေးခယျြမှုဖြစ်လိမ့်မည်.
ခုနစ်နှစ်များအတွက်, ဒါဟာတစ်ဦးက X-ray စက်နီးပါးတစ်ဝက်အသက်ပေတည်း.
သို့သျောလညျး, သုညပျက်ကွက်လည်းမရှိ, သုညပြုပြင်နှင့် X-Ray စက်ကိုများအတွက်သုညတိုင်ကြားစာ, ပင်နဂိုအတိုင်းပန်းချီဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော.
ကျနော်တို့ ORICH ကိရိယာဟာသူတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအသစ် Vision ၏တက္ကသိုလ်ဆေးရုံများ၏ပညာရှင်များနှင့်ရေဒီယိုရောင်ခြည်အထူးကုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်.
ငါတို့သည်တရုတ်နှင့် ORICH ပိုပြီးဂုဏ်ယူ.
ဤသည် ORICH လူများ၏အယူဝါဒဖြစ်ပါသည်!
ပြီးခဲ့တဲ့လကအဆိုပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်, အဘယ်အရာကိုသူတို့က Want - Luanchuan